Nhau - Dzakasiyana Nzira dzekucheka dzeLaser Kucheka Muchina
Laser yekucheka isiri-yekudyidzana nzira yekugadzirisa ine yakakwira simba uye yakanaka kuwanda controllability. Iyo laser nzvimbo ine yakakwira simba kuwanda inoumbwa mushure mekutarisa iyo laser danda, iyo ine akawanda maitiro kana ichishandiswa mukucheka. Pane nzira ina dzakasiyana dzekucheka laser kuitira kuti ubate nemamiriro akasiyana.
Mune laser inonyungudutsa kucheka, iyo yakanyungudutswa zvinhu inodzingwa nenzira yemafafitera mushure meiyo workpiece yanyungudika munharaunda. Nekuti kuchinjiswa kwezvinhu kunoitika chete mune kwayo mvura mamiriro, maitiro aya anonzi laser yakanyunguduka kucheka.
Iyo laser danda ine yakachena kuchena inert yekucheka gasi inoita kuti iyo yakanyungudutswa zvinhu zvisiye iyo yakatemwa, nepo iyo giri pachayo isingabatanidzwe mukucheka. Laser yakanyunguduka kucheka inogona kukwirisa yekumhanyisa kumhanya pane kuchenesa kucheka. Simba rinodiwa pakuita gasi rinowanzo kwira kupfuura iro simba rinodiwa kuti inyungudise zvinhu. Mune laser yakanyunguduka kucheka, iyo laser danda inongomiswa zvishoma. Iyo yekukwirisa yekumhanyisa mhanyisa inowedzera pamwe nekuwedzera kwesoftware simba, uye inoderera zvakapesana nekuwedzera kweplate ukobvu uye zvinhu zvinonyungudika tembiricha. Muchiitiko cheimwe simba remalaser, chinodzikisira chinhu kumanikidza kwemhepo pakatsemurwa uye nekupisa kwekushisa kwechinhu. Kune iron uye titanium zvinhu, laser yakanyunguduka kucheka inogona kuwana isiri oxidation notches. Zvezvinhu zvesimbi, iyo laser simba density iri pakati pe104w / cm2 uye 105W / cm2.
Mukuita kwekucheka kweraserification, kumhanya kwetembiricha pamusoro pevhu kuchikwira kusvika pakuvira kwekutonhora tembiricha kuri kukurumidza zvekuti kunogona kudzivirira kunyungudika kunokonzerwa nekupisa conduction, saka zvimwe zvinhu zvinopisa mumhepo uye zvinonyangarika, uye zvimwe zvinhu zvinopepereswa kure ne pasi pekucheka musono nerubatsiro gasi kuyerera se ejecta. Yakanyanya yakakwira laser simba inodiwa mune ino kesi.
Kuitira kudzivirira iyo mweya mhute kubva kuumbika pamadziro akatsemuka, hukobvu hwezvinhu haufanire kunge hwakakura zvakanyanya kupfuura hupamhi hwesimbi yedanda. Maitiro aya saka anokodzera chete kunyorera uko kubviswa kwezvinhu zvakanyungudutswa kunofanirwa kudzivirirwa. Muchokwadi, maitiro acho anongoshandiswa mumunda mudiki kwazvo wekushandiswa kwesimbi-yakavakirwa alloys.
Maitiro acho haakwanise kushandiswa kumidziyo yakaita sehuni uye zvimwe zvigadzirwa zvevhu, izvo zvisiri munzvimbo yakanyungudika uye hazvigone kubvumidza hutsi hwezvinhu kuti hugadzirise zvakare. Uye zvakare, izvi zvinhu zvinowanzo fanirwa kuwana mukobvu wakatemwa. Mune laser gasification yekucheka, iro rakanakisa danda rinotarisa zvinoenderana nehukuru hwezvinhu uye danda mhando. Laser simba uye kupisa kwekupisa kwemhepo zvinongova nemhedzisiro pane yakanakisa nzvimbo yekutarisa. Iyo yekukwirisa yekumhanyisa mhanyisa inopindirana zvakaenzana neiyo gasification tembiricha yezvinhu kana iyo ukobvu hwendiro hwagadziriswa. Iyo inodiwa laser simba density iri rakakura kupfuura 108W / cm2 uye zvinoenderana nezvinhu, kucheka kudzika uye danda rinotarisa chinzvimbo. Panyaya yehumwe ukobvu hwendiro, uchifungidzira kuti kune yakaringana laser simba, iyo yekumhanyisa yekucheka kumhanya inogumira neiyo gasi jeti kumhanya.
3.Controll kutsemuka kutema
Kune brittle zvinhu zviri nyore kukuvadzwa nekupisa, kumhanya-kumhanya uye kudzora kutema ne laser danda kudziyisa inonzi inodzorwa kutsemuka kutsemura. Iyo huru yezvinyorwa zveiyi yekucheka maitiro ndeiyi: iyo laser danda inopisa nzvimbo diki yezvinhu zvinopwanyika, izvo zvinokonzeresa yakakura yekupisa gradient uye yakakomba michina deformation munzvimbo ino, zvichitungamira mukuumbwa kwekutsemuka mune izvo zvinhu. Chero bedzi iyo yunifomu yekupisa gradient ichichengetwa, iyo laser danda inogona kutungamira chizvarwa chekutsemuka mune chero nzira yaunoda.
4.Oxidation yakanyunguduka kucheka (laser murazvo kucheka)
Kazhinji, inert gasi inoshandiswa mukunyungudika nekucheka. Kana okisijeni kana imwe gasi inoshanda ikashandiswa pachinzvimbo, izvo zvinhu zvinozobatidzwa pasi peiyo irradiation ye laser danda, uye imwe inopisa sosi ichagadzirwa nekuda kwekukomba kwemakemikari maitiro neoksijeni yekuwedzera kupisa izvo zvinhu, zvinonzi oxidation kunyunguduka nekucheka .
Nekuda kweichi chiitiko, iyo yekucheka mwero wesikirwo simbi ine yakafanana ukobvu inogona kuve yakakwira kupfuura iyo yekunyunguduka kucheka. Kune rimwe divi, mhando yeiyo incision inogona kuve yakaipa kupfuura iyo yekunyunguduka. Muchokwadi, ichaburitsa yakafara matanda, kuonekera kuomarara, kuwedzera kupisa kwakakanganisa nzvimbo uye hwakaipisisa hunhu. Laser murazvo kucheka haina kunaka kumashini chaiyo mamodheru uye makona akapinza (pane njodzi yekupisa makona akapinza). Pulse modhi lasers inogona kushandiswa kudzikisira mhedzisiro yemagetsi, uye simba re laser rinoona yekumhanyisa kumhanya. Muchiitiko cheimwe simba remalasi, chinogumira chinhu kugoverwa kweoksijeni uye kupisa kwekushisa kwechinhu.